Voalohany, teknolojia fananganana shingle 1 Drafitra fananganana zaridaina sedera Fanamboarana tabilao famafazana katsaka → Fanamboarana eny amoron-drano → Fanamboarana taila mihantona → Fananganana taila tampon-trano → Fanamboarana iraisana → fanaraha-maso
Taona 2019 mandray anjara amin'ny fananganana toerana ririnina olympika
Ny vohitra olympika ririnina any Beijing dia iray amin'ireo toerana hanaovana ny lalao olympikan'ny ririnina 2022 taona, miaraka amin'ny velarana fananganana manodidina ny 333000 metatra toradroa. Ity tetik'asa ity dia tetik'asa lehibe iray any Sina. Hanbo ™ dia nomem-boninahitra ho lasa mpamatsy sy singa fananganana shingles. Araka ny re ...
Hanbo ™ nandresy ny lokan'ny injeniera sloping taom-pianarana iraisam-pirenena taona 2019!
Ny loka IFD tafo dia naorina tamin'ny 2013, fantatra amin'ny anarana hoe "Olaimpika" mari-pahaizana indostrialy tafo. Talohan'izay dia natao indray mandeha isan-taona ny kaonferansa IFD sy ny Tompondakan'ny tafontrano ho an'ny tanora manerantany, matetika any amin'ny firenena samihafa eran'izao tontolo izao amin'ny fararano. Nanomboka ny taona 2013, ny IFD dia ...